Moto G6, G6 Plus na G6 Play: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Mgbe izu ole na ole gwụsịrị na ekwentị atọ ahụ, Motorola mechara nyefee mpaghara ọhụrụ ya. Ọ bụ a nso a na-ọhụrụ na atọ ụdị na-eru Moto G nso. Ọ bụ maka Moto G6, G6 Plus na G6 Play. Ekwentị atọ bụ ume nke ikuku ọhụrụ n'etiti etiti ụlọ ọrụ ahụ. Ma na usoro nke imewe na nkọwa.
Ebe ọ bụ na anyị nwere ike, dị ka ụdị, nzọ na nnọọ ugbu a haziri na 18: 9 ihuenyo. Ihe bụ ihe ọzọ, Nwere ike ịhụ nnukwu mmụba na usoro nkọwa na Moto G6, G6 Plus na G6 Play. Ya mere, ihe niile na-egosi na ha ga-enwe ihe ịga nke ọma maka Motorola.
Ọzọkwa, anyị nwere nkọwa zuru ezu nke ụdị atọ dị, nke mere na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha zochiri anyị ihe nzuzo. Na-esote anyị ga-agwa gị, n'otu n'otu, banyere Moto G6, G6 Plus na G6 Play nke Motorola na-eme ka ọ dị n'etiti.
2 Nkọwapụta Moto G6 Plus
3 Nkọwapụta Moto G6 Play
Anyị na-amalite site na ekwentị nke na-eme baptizim ụdị ọhụrụ a. Ekwentị na-akọwapụta etiti dị ugbu a n'ụzọ zuru oke n'ihe gbasara nkọwa. Ya mere, ọ bụ ekwentị mgbaze na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma ma nwee ọtụtụ ma ọ bụ obere ihe niile ndị ọrụ chọrọ taa. Yabụ na enweghị mgbagha, nke a bụ ezigbo akwụkwọ ozi mkpuchi. Ndị a bụ nkọwa nke Moto G6:
Ihuenyo: 5,7 ″ IPS LCD na mkpebi FullHD + na oke 18: 9
NhaziAha nhazi: Snapdragon 450
Nchekwa ime: 32/64 GB (gbasaa na microSD)
Rear igwefoto: 12 + 5 MP nwere oghere f / 1.8, PDAF, ọnọdụ eserese na vidiyo vidiyo 1080p
Igwefoto n'ihu: 8 MP nwere ihe ndekọ vidiyo 1080p
Batrị: 3.000 mAh na ngwa ngwa
ndị ọzọ: Onye na-agụ akara mkpịsị aka ihu, ụdị USB C, Bluetooth 4.2, Dolby Audio n'ihu ọkà okwu, nguzogide mmiri
Akụkụ: 153,8 x 72,3 x 8.3 mm
Ibu ibu: 167 grams
Nkọwapụta Moto G6 Plus
Ihe omuma nke abuo a bu uzo zuru oke nke ihe omuma gara aga. Ọzọkwa, ọ ka buru ibu. Ma o nwere ọtụtụ isi ihe jikọrọ ya na ekwentị nke anyị gosipụtara ugbu a. Ọ bụ mpaghara kachasị dị n'etiti ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara taa. Ngwaọrụ dị mma, nwere arụmọrụ dị mma yana nke ahụ nwere ọrụ dịka mmata ihu. Ndị a bụ nkọwa gị:
Ihuenyo: 5,9 sentimita asatọ IPS LCD na mkpebi FullHD + na 18: ogo 9
NhaziAha nhazi: Snapdragon 630
Rear igwefoto: 12 + 5 MP nwere oghere f / 1.7, PDAF, ọnọdụ eserese na vidiyo vidiyo 4K
ndị ọzọ: Front fingerprint agụ, USB ụdị C, Bluetooth 5.0, NFC, mmiri na-eguzogide
Akụkụ: 160 x 75.5 x 8.0 mm
Na ebe nke atọ anyị na-ahụ ekwentị dị mfe nke atọ na ụlọ ọrụ ahụ ewepụtara n'ime oke a. Ọ bụ obere ekwentị dị mfe, nke yiri nke mbụ. Ọ bụ ezie na ọ nwere nkọwa nke mmasị, nke ahụ bụ na ọ bụ naanị otu n'ime mmadụ atọ nwere onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ ọ bụ n'ihu. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu Nke ngwaọrụ:
Ihuenyo: 5,7 sentimita asatọ IPS LCD na mkpebi FullHD + na 18: ogo 9
NhaziAha nhazi: Snapdragon 430
Nchekwa ime: 32 GB (gbasaa na microSD)
Rear igwefoto: 13 MP nwere oghere f / 2.0, PDAF, ọnọdụ eserese na vidiyo vidiyo 1080p
Batrị: 4.000 mAh na ngwa ngwa
ndị ọzọ: Bluetooth 4.2, onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ, microUSB, Dolby Audio n'ihu ọkà okwu
Akụkụ: 154,4 x 72,2 x 9 mm
Ozugbo amaara nkọwa nke ekwentị atọ ahụ, ajụjụ abụọ ka ga-aza, ọnụahịa na ụbọchị ekwentị ga-akụ ahịa. Luckily, anyị nwere ụfọdụ ozi banyere dum Moto G6 nso.
A ga-ebido ụdị atọ a na ahịa na mbido Mee.. Yabụ n'ihe dịka izu abụọ ma ọ bụ atọ, ha ga-amalite ịbata n'ụlọ ahịa. Anyị ga-agwa gị mgbe nke a mere. Na mgbakwunye, anyị amatala ọnụahịa ha:
Moto G6 Plus ga-enweta site na euro 299
El Moto G6 ga-enwe ọnụahịa site na euro 249
Motorola Moto G6 Play ga-adị na ọnụahịa nke euro 199
Kedu ihe ị chere maka ekwentị Motorola ọhụrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Motorola Moto G6, G6 Plus na G6 Play: A na-emegharị etiti etiti